Fiokona, fitsaram-bahoaka tany Andapa: nirefotra ny basy, roa no maty, 7 naratra | NewsMada
Fiokona, fitsaram-bahoaka tany Andapa: nirefotra ny basy, roa no maty, 7 naratra
Sakoroka, fiokoana, fitsaram-bahoaka. Izany no nitranga tao Andapa, omaly, tolakandro. Nitafihan’ny andian’olona nitaky hamoahana tovolahy iray hanaovana fitsaram-bahoaka ny borigadin’ny zandary. Nirefotra ny basy, ka sivily roa no fantatra fa maty, ankoatra ireo olona fito naratra. Naratra vokatr’izany koa ny zandary iray.
Nanao tohivakana ny fitsaram-bahoaka, ny alaorobia teo, ary namoizana ain’olona maro. Ankoatra ireo polisy telo lahy tany Fenoarivo Atsinanana. Nisehoana rotaka indray koa tany Andapa, afakomaly hariva. Resaka fitsaram-bahoaka ihany koa io, ary nirohotra nanafika ny tobin’ny zandary ny olona. Nirefodrefotra ny basy ka zandary iray no naratra, sivily roa no maty ary fito hafa mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly ao Sahamazava. Potika ny biraon’ny zandarimariam-pirenena any an-toerana. Araka ny fanazavana, tovolahy namono zazakely roa tao Andasibe Maheverika, voasambotry ny zandary ny fototry ny olana. Tranga niseho tamin’ny alatsinainy 22 oktobra teo izy io.
Ny alarobia teo, tamin’ny 4 ora hariva, nisy andian’olona avy any Andasibe Mahaverika Andapa nirohotra nanoloana ny tobin’ny zandary, ary nitaky ny hamoahana ilay tovolahy, hampiharana fitsaram-bahoaka. Tsy eken’ny lalàna anefa izany, ka nanda ny hamoaka izany ny zandary ary izay no nahatonga ny fifandonana. Saika hirohotra, noho izany, ireo andian’olona ka nitifitra ireo zandary. Roa no namoy ny ainy teo noho eo. Ary nisy ireo naratra nentina tany amin’ny hopitaly. Na izany aza, nisy tafiditra tao amin’ny birao ireo olona marobe ka nandravarava ny tao anatiny. Tao anatin’izany savorovoro izany, nitranga ny tifitra avy amin’ny zandary. Raha tsy nisy izay, tsy niparitaka ireo andian’olona. Tonga tany Andapa ny mpitandro filaminana avy any Sambava nanampy tosika sy namehy ny filaminana.
Nitaky fitsaram-bahoaka ny olona tany Vavatenina
Tsy tany Fenoarivo Atsinanana sy Andapa ihany, fa hatrany Vavatenina nisehoana izay fitakiana fitsaram-bahaoka izay koa, omaly maraina. Lehilahy iray voasambotry ny zandary ny fototry ny olana, ny alarobia hariva teo, taoriana fanafihana nitranga. Voalaza fa jiolahy mpanao fanafihana any an-toerana io notakin’ny olona hanaovana fitsaram-bahoaka.
Omaly maraina, tonga maro nirohotra nankany Vavatenina ireo vahoaka maro avy tao amin’ny kaominina Antanamarina. Niantso ny tao amin’ny distrika hamoaka an’ilay mpangalatra hanaovana fitsaram-bahoaka. Nirohotra nankeny amin’ny biraon’ny polisy taorian’izay. Nisy ny tora-bato nahazo ny biraon’ny polisy. Polisy iray, vaky loha. Niezaka nanazava ny teo anivon’ny kaomisaria fa tsy ao amin’izy ireo ilay olona tadiaviny. Tsy nanaiky ny vahoakan’Antanamarina fa nisisiky hatrany hiditra hisava ny kaomisaria. Voatery nanao tifi-danitra ny polisy.
Niparitaka niala teo anoloan’ny biraon’ny polisy indray avy eo ireo vahoaka ka nirohotra nankeny amin’ny tobin’ny zandary. Niezaka nitsofoka tao anaty toby. Voatery nanao tifi-danitra ny zandary. Naharitra ora iray teo ho eo no nijanonan’ireo vahoaka teo anoloan’ny biraon’ny zandary tao Vavatenina. Niezaka nandresy lahatra ny vahoakany mba hiala sy hiverina hody ny ben’ny Tanànan’Antanamarina. Niparitaka ihany ny olona, nilamina ny raharaha aloha. Ahina ny hitaran’ity resaka fitsaram-bahoaka ity any amin’ny faritra hafa, raha izao no mitohy.